Moa ve mora kokoa ny manao ny ranonao manokana? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Manao ranom-boankazo ao an-trano - mitady vahaolana
Manao ranom-boankazo ao an-trano - mitady vahaolana
Moa ve mora kokoa ny manao ny ranonao manokana?
Ranona namboarinadia bemora vidy kokoanoho nyranom-boankazoavy amin'ny toeram-pivarotana na fivarotana enta-madinika.
Ranom-boankazo! Eny ary, fa efa hitako daholo ny sain'i LA, eto aho hamaly ny fanontaniana mirehitra izay ananan'ny millennial: miasa ve ny ranom-boankazo sy ny maina? - Dokotera Bronx 68 taona mahazatra, Dr. Saper andraso, tsy Dr.
Saperstein? - Tsia, Dr. Mikhail Varshavski aho, misy olona mahalala ahy bebe kokoa noho ny Dr. Mike: Ary anio aho eto mba hilaza aminareo rehetra ny momba ny ranom-boankazo sy ny fitrandrahana - Eny, tsy mandrahona izany.
Nandritra ny toerana kely iray, ny hevitra momba ny fanapoizinana sy ny fanadiovana dia efa an'arivony taona maro izay. Mazava ho azy, ny fiakaran'ny ranom-boankazo sy ny fanadiovana dite tato ho ato dia namorona tsena vaovao ho an'ireo orinasa maniry tombontsoa toy ny fanasitranana amin'ny hangover, manalefaka anao, ary manasitrana aretina mihitsy aza. Rehefa tonga eto ianao dia lazao amiko izay poizina inona ihany? - Ny poizina dia teny filozofika kokoa satria ny poizina dia akora ratsy ho an'ny vatana, sa tsy izany? Fa raha mieritreritra an'izany ianao, raha be loatra aminao, raha be loatra aminao izany, raha be loatra ny rano azonao, dia mety hanimba tena ianao raha be loatra ny rano alainao.
Ary heveriko fa ny kolotsaina iray manontolo manodidina ny teny hoe poizina dia novolavolain'ny mpivarotra fa tsy ny dokotera - Ahoana no fanalana ny vatana ireo poizina filozofika ireo? Mazava ho azy? - Isaky ny te hiala amin'izany ireo ny vatanao, dia taova roa no tena ifantohany. Ny aty sy ny voa. Ianao koa dia manana rafitra hafa tafiditra, toy ny rafitra lymphatic.
Na ny hoditra aza dia manao asa tena tsara amin'ny fanesorana ny sasany amin'ireo poizina ireo. Ny fomba fiasan'ny aty sy ny voa amin'ny fanesorana ireo poizina ireo dia amin'ny alàlan'ny atiny miasa amin'ny poizina hanadiovana azy ireo mora amin'ny urinao sy ny tainanao. Ie, ny ankamaroan'ny olona tsy mieritreritra an'izany.
Fa mitranga isan'andro izany, isaky ny iray minitra ao amin'ny vatanao dia manala ireo poizina ireo - Mmm, diky. Inona avy ireo ranom-boankazo na fifadian-kanina, orenemas, na arina arina ireo? - Misy ny sasany, misy porofo maivana be dia be hanehoana fa ny sasany amin'ireo famenon-tsakafo ireo dia manampy ny detox amin'ny vatanao. Fa ny zavatra atao dia ny manampy ny vatanao hanala tena.
Ireo tompon'andraikitra ireo dia tsy tompon'andraikitra mivantana amin'izany. Ka raha manaraka sakafo mahasalama ianao, manankarena voankazo sy legioma ary proteinina, dia efa nanao asa fanapoizinana ny vatanao. Tsy mila an'ireto fanampin-tsakafo ireto ianao vao miasa.
Fanampin'izany rehetra izany. Tsy ilaina izany rehetra izany. Ary raha tsy manana torolàlana manokana ianao haka ny sasany amin'ireto zavatra ireto dia tsy ilaina mihitsy izany. - Betsaka ny olona manao an'izao handehanana ka hahavery 10 pounds toa ny nolazainao.
Azo atao ve izany ary mahasoa anao? - Misy tombony sasany, ary holazaiko fa miaraka amina sira, fa misy tombony azo avy amin'ny fihinanana ranom-boankazo. Ohatra, raha matetika ianao no mihinana an'i McDonald's intelo isan'andro ary mihinana burger matavy dia tampoka ianao dia nijanona ary nandao izany ary nisotro ranom-boankazo mahasalama fotsiny. Eny, mahasalama kokoa amin'ny lafiny sasany io noho ny mihinana ao amin'ny McDonald's ary mety ho very lanja kely ianao satria hihinana kaloria kely kokoa, saingy misy fomba tsara kokoa hanaovana an'io, fomba mahasalama kokoa.
Ny lakileny dia ny sakafo maharitra misy lalàna voafetra, voafetra prescription, iray ahafahanao manandrana sakafo sasany, mihinana vatomamy etsy sy eroa, nefa tsy manimba ny sakafo manontolo. Tsy mandeha ny sakafo fianjerana. - Fa ny dokotera Mike, ahoana ny amin'ireo zavatra lazain'ireto ranom-boankazo ahy ireto fa hitranga amiko? - Eny, lazao amiko izay lazain'izy ireo, mety hiaraha-mamantatra azy isika - Eny, voalaza fa handrisika ny rafi-pandevonan-kanina ary manampy amin'ny famoahana bakteria sy poizina. - Inona ny toky, ny marketing ao ambadika, izay no mahafaty ahy satria izay lazain'izy ireo dia ny hahatonga ny rafi-pandevonan-kanina handehananao, maminavina inona? Rehefa manana karazan-tsakafo mety mandeha amin'ny rafi-pandevonan-kanina ianao.
Tokony bakteria ao amin'ny tsinainao izany. Ka ny fanesorana ny bakteria rehetra ary milaza fa hanaisotra azy ireo dia tsy ilaina mihitsy. Marketing dia nilaza fa tsy maintsy hampientanentana anao fotsiny izany rehefa tsy fantatrao ny tena marina fanafody .- Ary ahoana izany? Voalaza fa ity tonika ity dia tokony hamandoana ny hoditra, hampitombo ny elastika, hampihena ny ketrona ary hiteraka famokarana collagen vaovao - ity zava-pisotro ity dia mazava fa mipetraka amin'ny tany nofinofy.
Satria raha izany no izy, ny olona dia tsy handany $ 100 amin'ny menaka fanosotra, dolara an'arivony amin'ny fomba fitsaboana, ary ny fandidiana mba hitazomana ny hodiny ho tsara indrindra. Fa ny fehin'ireo zavatra rehetra ireo dia ny fiezahany hihinana ny fanafody famonoana, ezahin'izy ireo atokatokana ireo fangaro izay manamboatra ny vatanao, ary milaza fa raha manana bebe kokoa ianao dia hahazo tombony bebe kokoa. Mahazo hoditra tsara kokoa ianao.
Fa raha ny tena izy dia mety efa manana ny ankamaroan'ireo otrikaina ireo amin'ny vatanao amin'ny ambaratonga mahazatra. Ny betsaka kokoa dia tsy voatery ho tsara kokoa noho ny tsy misy fiantraikany amin'ny hoditrao ankoatry ny hoe rano izy io ary mitazona anao hamandoana. Ary rehefa voadoka tsara ny hoditrao dia toa tsara izany - azonao ilay izy.
Miala tsiny amin'ny fanimbana ny biraonao. (Hehy) - Eny, Dr. Mike, ianao no nanimba ny ranom-boankazo ho ahy.
Inona ny fehiny eto? - Ny fehiny dia tsy voatery hoe ratsy ny ranona. Ny fisotroana ranom-boankazo isaky izao ary avy eo dia milamina tsara. Manome anao vitamina vitsivitsy izy io.
Omeko mineraly mahafinaritra ianao. Fa aza manantena ny hanao zavatra manova fiainana. Tsy hahasitrana aretina izany, tsy hitazona anao tsy ho reraka.
Tsy hanampy anao hihena izany. Ny fomba tokana anaovany ireo zavatra rehetra ireo dia rehefa mihinana fako tanteraka aho. Manana fifandraisana salama amin'ny dokoteranao, apetraho ireo fanontaniana ireo ary alao antoka fa tsy misoratra anarana amin'ny varotra varotra ianao - fa hanampy ahy hanakaiky kokoa ny dadako ve ireo ranony ireo? - Mampalahelo tsia.- Aw lehilahy.
Misaotra anao eto ary mamaly ireo fanontaniako mamy - Mazava ho azy - Nahazo izany? Tony iany ho an'ny siansa rehetra miaraka amin'i Doctor Mike. Mandra-pahatongan'ny manaraka. Veloma!
Ahoana no anaovanao ranom-pahasalamana?
EFATRAara-pahasalamanafanamboarana ranom-boankazo mba hanomezana angovo voajanahary ny vatanao ary manampy amin'ny fanapoizinana ny vatana!Juicemipoitra hatraiza hatraiza ny fisotroana noho ny antony marim-pototra!
Misotroa ny anana:
2 kaopy ravina episy (na ravina kale 4-6)
Kôkômbra 2 lehibe.
Paoma antonony 2.
1-2 inch sakamalao.
1/4 - 1/2 kaopy ravina Parsley.
Tamin'ny taon-dasa dia nanao lahatsoratra momba ny sakafo fanoherana ny inflammato nohaniko isan-kerinandro ary manana fomba fijery roa tapitrisa sy sasany mahery izao, hoy aho hoe malaza be io. Androany aho dia nieritreritra fa hanaraka ity lahatsoratra ity momba ny zava-pisotro misy anti-inflammatoire izay tiako ny misotro ary heveriko fa ho toy izany koa ianao. Ireo zava-pisotro ireo dia manome otrikaina isan-karazany, antioksida ary fitambarana ady radika maimaim-poana hitazomana ny fivontosana mba hanomezana hery kely ny hery fiarovantsika.
Ary heveriko fa azontsika rehetra natao ny nampiasa izany, indrindra amin'ity taona ity dia manana safidiko zava-pisotro mahery aho anio, saingy azo antoka fa ho hitanao zava-pisotro voasary marobe ary izany dia satria ny turmerika no tena ilaina amin'ny maro amin'izy ireo, manomboka amin'ny mafana avy any amin'ny dite ka hatrany amin'ny savony mangatsiaka. Ankehitriny talohan'ny nilazan'ny olona iray fa nanadino ny ronono volamena aho tamin'ny lahatsoratra androany, dia niniako natao izany satria efa nanao lahatsoratra iray hafa momba an'io aho ary nieritreritra aho fa hanome anao fomba fahandro vaovao vaovao anio, saingy tena anti-kilasika tokoa io. zava-pisotro mamaivay. Zavatra farany iray ary ity dia fanontaniana iray ampahatsiahiviko anao fa afaka mahita ireo kinova azo pirinty amin'ireo resipeo rehetra ireo ianao sy ny maro hafa ao amin'ny tranonkalako.
drafitra fanofanana zwift
Ka raha tsy misy resaka intsony dia andao hanomboka. Ny zava-pisotro voalohany hataontsika dia ity dite anti-panahy lalina sy mainty ity. Mety efa naheno momba ny elderberry ianao talohan'io satria io dia voankazo mampihena ny hery fiarovana ampiasaina amin'ny fitsaboana mangatsiaka sy gripa be loatra toy ny lozenges sy syrups.
Saingy anio isika dia hisoroka ny siramamy, ny fandokoana ary ireo akora hafa amin'ny dite misy singa telo tsotra, ary hahazo izany tombontsoa ara-pahasalamana izany avy hatrany amin'ny loharano, mametraka rano roa kaopy ao anaty potalong misy sotro eran-trondro maina, ary ianao Ho hitako eo no ho eo ny voaroy ny lokon'ny ranomainty avy eo ampio hazo kanelina, izay tsy mahafinaritra fotsiny ny manandrana fa koa manohitra ny areti-maso, avy eo ampangotrahina ny vilany, ahenao ny afo ary ahenao mandritra ny 15 minitra. Raha vantany vao simba ny dite, vonoy ny hafanana ary avelao hipetraka mandritra ny dimy minitra izy, avy eo sakano. Ny kaopy fandrefesana lehibe kokoa aloha satria miraraka aho, avy eo arotsako ao anaty kaopy.
Ity dite haingam-pandeha sy mora ity dia hanafana anao amin'ny andro mangatsiaka, fa raha mafana kosa dia alao fotsiny ity dite ity rehefa vita ianao ary arotsaho amin'ny ranomandry izany ho an'ny safidy dite misy ranomandry mamelombelona. (mozika malefaka) Manaraka ny lisitray dia zava-pisotro nianarako namboarina nandritra ny roa volana tany Indonezia ary izany dia i Jamu. Mampalahelo fa tany Bali aho dia nahazo gluten tsy nahy ary nanana aretina autoimmune mahatsiravina ary io zava-pisotro jamu nentim-paharazana io no tena mpamonjy ahy.
Na dia misy fiovaovan'ny jamu aza dia matetika turmerika no tena ilaina ao aminy, ary noho izany dia ampirisihiko hividy faka turmerika vaovao raha azonao izany. Ny faka turmerika dia mitovy habe sy endrika amin'ny faka-sakamalao, fa rehefa vakinanao dia miloko volomboasary mamirapiratra ary ny sakamalao dia loko mavo maivana. Ary samy miaraka manao zava-pisotro mahery vaika fanoherana ny inflammatoire.
Mba hahavitana azy dia mila kaopy turmerika voatavo voatavo sy sombin-kazo mitovy habe amin'ny rantsantanana ianao, hasiantsika izany amin'ny farany. Azonao atao ny mandingana ny dingana manafoana, raha aleonao tsy manala ny rantsan-tànanao, omena fotsiny ny turmerikao sy ny sakamalao. Mihofahofa aho ary indraindray manodinkodina azy ary indraindray tsy refesiko amin'ny sombin-tany tokony ho fahefatra santimetatra ny hateviny na avy eo ampiako ao amin'ny blenderanao.
Mba hanaovana izany dia hafafiny dipoà mainty kely. Ny dipoavatra mainty dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fandraisana ny curcumin avy amin'ny turmeric. Arotsaho anaty rano kaopiana efatra kaopy, izay misy antioxidants sy electrolytes, avy eo afangaro amin'ny hafainganam-pandeha mandritra ny iray minitra na mandra-pilaminana. (Mozika malefaka) Araraka ao anaty vilany izany ary ampangotraho, avy eo ahenao Asiana ambony ambony ny hafanana ary apetaho mandritra ny 20 minitra.
Vonoy ny afo ary ampio ny ranom-boasarimakirana iray sy tantely roa sotro fihinana ary afangaro. Araraoty amin'ny alàlan'ny fantsom-boaloboka na kitapom-boaloboka ilay fangaro, nefa tandremo fa tena handoto ny kitaponao misy ronono voanjo miaraka amin'ny fitafianao, ny latabatra ary izay rehetra mifandray aminy, koa mitandrema. Averiko indray ao anaty vilia fandrefesana lehibe kokoa izy miaraka amin'ny tsiranoka handrotsaka kely kokoa ary araraka ao anaty vera izay tazomiko ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny Jamu dia afaka mankafy mangatsiatsiaka na mafana ary hitazona ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny herinandro, ahintsano fotsiny alohan'ny hanompoana azy. Ary matetika aho dia mankafy antsasaky ny kapoaka amin'ny fotoana iray. (mozika malefaka) Ho an'ny fisotroana manaraka dia karazana fitambaran'ireo roa voalohany izy satria dite turmerika ary tena mora ny manamboatra azy.
Atsofohy ao anaty vilany fotsiny ny rano roa kaopy ary amin'ity indray mitoraka ity dia turmerika no ampiasaina fa tsy turmerika vaovao, mba hanolorana safidy vitsivitsy fotsiny. Ka arotsaho ao anaty turmerika antsasaky ny sotrokely miaraka amin'ny dipoavatra mainty ampahefatry ny sotrokely sy ranom-boasarimakirana roa sotro, izay sahala amin'ny vola azonao avy amin'ny voasarimakirana iray. Ento mangotraka ity ary vantany vao mangotraka dia ahenao ny hafanana avelao hirehitra mandritra ny 10 minitra, avelao hirehitra ny dite, vonoy ny hafanana, ampio Ho, raha tianao dia aforeto ary avelao hiditra ny dite na milay mandritra ny roa minitra.
Araraka amin'ny sivana ao anaty kaopy ny dite hanesorana ny dipoavatra mainty ary andramo indray mba tsy handraraka ny turmerika ary aza hadino ny mamafa azy io avy hatrany. Ho an'ny tsiro voasarimakirana fanampiny fanampiny dia manampy vitsivitsy foana ny tsiranoka voasarimakirana vaovao ary tsy maintsy lazaiko fa mafana ity fantsom-panafody ity nefa matsiro, ka dia naka sip kely kely aho. Nangataka ity fomba fahandro manaraka ity aho tamin'ny taon-dasa ary ireto dia fitifirana sakamalao.
Ny tifitra sakamalaho novidiana tao amin'ny magazay dia lafo vidy ary mitovy amin'ny tifitra fahasalamana an'ny marika fototra. Ankehitriny dia azonao atao ao an-trano izany. Ho an'ity fomba fahandro ity dia mila amina ampahefatry ny faka sakamalao voatetika ianao, ary averiko ihany koa fa mety hosoratanao ny sakamalao.
Mila ranom-boasarimakirana kapoaka fahatelo koa ianao, izay manodidina ny telo ka hatramin'ny efatra ny voasarimakirana, arakaraka ny habeny. Ranom-boaloboka sy ranom-boasarimakirana miaraka amina kaopy ampahefatra amin'ny Mametaka mixer avo lenta ao anaty rano voanio ary potsiro na hafafazo sakay kely. Arotsahy avy eo ny fonony, afangaro mandritra ny iray minitra eo ho eo, na mandra-pilalaovan'ny fifangaroana. (mozika malefaka) Aorian'ny fangaro, afangaro amin'ny alàlan'ny fantsom-boaloboka tsara ao an-damosin'ny sotro ny ranoka mba hitrotro ranom-boankazo araka izay tratra.
Araraka ao anaty vera voatifitra ny ranon-tahiry ary sotroy indray mandeha indray mandeha. Ary eny, ireo dia mitovy tsiro sy matsiro ihany noho ireo novidina tao amin'ny magazay. (mozika malefaka) Manaraka ity lisitray ity dia savoka turmerika mangatsiatsiaka mamelombelona sy mamelombelona, ​​izay tonga lafatra rehefa mafana ny andro any ivelany.
Ho an'ity fomba fahandro ity dia tombaniko ny sotro turmerika vao iray sotro fihinanana sy sakamalao sakamalao vaovao. Ary ho an'ity fisotroana ity, satria tsy manenjika azy izahay, dia te-hitroka ny turmerika sy ny sakamalao. Ao amin'ny blender adidy mavesatra anao, asio ronono tsy ronono iray kaopy, sakam-bolo mananasy roa kaopy feno enzima sy antioksida, akondro iray izay be potasioma ary manampy amin'ny famolavolana ity malama ity, sy ny turmeric c ary ny sakamalao.
Afangaro ity mandra-pahatonga azy ho tsara sy malama. (Mozika malefaka) Raha mila zava-pisotro turmerika malefaka miaraka amina endrika tropikaly mamy ianao izay mahatsapa ho tsara avy any ivelany dia ity no zava-pisotro ho anao. Tsy hoe tsy misy tamotamo, fa mbola feno otrikaina sy antioksida kosa, manana an'io voasarimakirana blueberry matsiro io aho.
Manampia rano voanio roa kaopy ao anaty blender anao miaraka amina blueberry mangatsiaka roa kaopy, akondro iray mangatsiaka, yaorta antsasaky ny kaopy na kefir ary azonao atao ihany koa ny mampiasa tsy misy ronono. Ary ny sotro fihinam-boankazo iray sotro fihinana, izay misy asidra matavy omega-3 mahasalama, dia hanampy amin'ny fanamafisana ny malama. Arotsahy avy eo ny fonony, afangaro mandritra ny 30 segondra, na toast mandra-pahatonga azy ho tsara sy mamy ary azo volomparasy. (mozika malefaka) Araraka ao anaty vera ilay malama, asio mololo raha sitrakao ary sotroinao ity zava-pisotro mamy sy mahery ity.
Fantatrao fa tiako ny voasarimakirana maintso ary manana resipeo marobe ao amin'ny tranonkalako aho fa raha te hanao izany, te-hampiseho aminao ny fomba fanamboarana ranom-boankazo aho ary ity dia kopia iray avy tamin'ny iray novidiko teo aloha avy amin'ny Pressed Juicery. Mba hanaovana izany dia mila ranom-boasarim-boankazo roa sotro ianao, izay matetika azo avy amin'ny sokay misy ranom-boankazo, kôkômbra nendahina ary manampy ranon-javatra voajanahary amin'ny ranonay maitso izahay, tahon-seleria telo izay noketehinao mafy, ary Apple iray izay namboarinao sy notapahinao, ary afaka mampiasa karazana paoma tianao ianao. Araraka ao anaty blender ny ranom-boasarimakirana miaraka amin'ny kôkômbra, paoma, sakamalao vaovao, seleria, ravina kale telo ary azonao atao fotsiny ny mamiravira ireo ravina amin'ireo taho sy episy epinara.
Ho feno tsara ny blenderanao amin'io fotoana io ary satria tsy manampy rano amin'ity resipeo ity ianao dia mila mampiasa ilay mpanery hametahana ireo akora ao anaty lelany. Ary mba hahamora kokoa ny fiaraha-miasa amin'ny blender anao, dia asio ireo akora misy rano betsaka ao anatiny, toy ny kôkômbra sy ny paoma, ao anaty blender mandritra ny iray minitra na tokony ho levona ho azy toy ny malama hafa. (mozika malefaka) Mazava ho azy fa azo sotroina matevina sy misy fibre izy io, saingy fantatro fa misy olona manana olana amin'ny fandevonan-kanina ny fibres ka mahatonga ranom-boankazo iray avy ao aminy, araraka ao anaty sachet ronono voanjo ary ento miaraka aminao ao anaty lovia iray , avy eo araraka ao anaty vera.
Ity dia ranom-boankazo maitso mahavelona misy tsiranoka mamy voajanahary avy amin'ny paoma. Ary raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana ny fanamboarana ranom-boasary tsy misy jus, dia ataovy. Ny zava-pisotro farany manohitra ny inflammatoire amin'ny lisitray anio dia ity paoma, karaoty ary bitika beet ity.
Ary azonao atao ny milaza amin'ny loko mena manjelanjelatra fa feno antioksida io, lazaiko foana fa io malama io dia mitovy amin'ny fisotroana legioma anao ary manomboka amin'ny karaoty telo izay efa nodiovinao, namboarinao ary nohetezanao ho roa santimetatra. Hanampy beter medium ihany koa ianao ary peel ny karaoty sy betiravy na tsia peel dia anjaranao izany. Matetika aho no manopy ny hoditr'izy ireo ary avy eo manapaka ireo betiravy ho vongana lehibe; ho an'ny mamy voajanahary, manendasà paoma iray, makà karazan-java-maniry tadiavinao ary avy eo ranom-boasary makirana lehibe iray.
Ataovy ao anaty blender anao haingana ilay ranom-boasary miaraka amina rano eran'ny kapoaka, ilay paoma voahidy, karaoty, betiravy ary sakamalao vaovao. Ampio ny sarony ary afangaro ambony ho iray minitra mandra-pahatapaky ny legioma sy ny malama. (mozika malefaka) Manankarena vitamina sy otrikaina io malama io ary tsara sy matevina.
Fa izao rehefa hainao ny manamboatra ranom-boankazo avy amin'ny malama, dia azonao atao foana koa ny manala iray raha tianao. Samy manana ny tiany sy ny volon-doko isika rehetra ary ny tanjoko dia ny hanome anao safidy. (mozika malefaka) Antenaiko fa nankafizinao daholo ireo fomba fahandro fisotroana rehetra ireo ary ho fampahatsiahivana, antonony ary isan-karazany no tena ilaina.
ny fomba fanakanana soavaly charley
Mirary fahafinaretana amin'ny famoahana ireo sakafo sy zava-pisotro mahasalama rehetra ankafizinao isan-kerinandro. Raha tianao ity lahatsoratra ity, azafady mba ampahafantaro ahy amin'ny fanomezana azy ireo ankihibe sy hizara ireo zava-pisotro anti-mamaivay tianao indrindra ao anatin'ireo fanehoan-kevitra. Bye, izany ho ahy amin'ity herinandro ity, hahita anao indray aho amin'ny lahatsoratra manaraka (mozika malefaka)
Ohatrinona ny ronono ao an-trano?
Manahy sao dia mendrika ny hanana ny anao manokana na tsiajuicer? Andao crunch isa vitsivitsy. Fianakaviana misy kalitaojuicerafakavidin'nyna aiza na aiza avy amin'ny $ 100- $ 400 raha nyvidin'nyny vokatra ampiasaina amin'nymisotro rononodia hiova arakaraka ny fanapahan-kevitrao momba ny ranom-boankazo sy ny hoe isaky ny firy ny ranonao.20 2015.
Ny ranona iza no mety tsara isan'andro?
Raha handeha fotsiny ianaozava-pisotrovera iray an'nyranom-boankazoisan'andro dia te-hanao azy atsarairay. Ka fantaroizay ranonamanolotra ny karama mahavelona lehibe indrindra isaky ny sip. ampongabendanitraranom-boankazotampon'ilay lisitra. Be siramamy sy kaloria izy io, nefa manome anao betsakatsara-mety ho anao otrikaina antsoina hoe antioxidant.
Salama ve ny ranona namboarina?
Tsia ny fihinanasalamanoho ny mihinana voankazo sy legioma manontolo. Ny fihinana Juice dia mamoaka nyranom-boankazoavy amin'ny voankazo na legioma vaovao. Ny ranon-javatra dia misy ny ankamaroan'ny vitamina, mineraly ary akora simika (pétonutrients) hita ao anaty voankazo.
Mendrika ve ny misotro ronono ao an-trano?
Ny ranom-boankazo ihany koa dia safidy tsara ho an'ireo mijaly amin'ny olan'ny vavony, satria mora levona kokoa ny ranom-boankazo noho ny voankazo sy legioma. Saingy tsy misy fikarohana siantifika tsara milaza izanymisotro rononotsara kokoa sy mahasalama kokoa noho ny fihinanana sakafo manontolo.29.01.2013
Mendrika ny vidiny ve ny fihinana Juice?
Somary mavitrika kokoa amin'ny asa, nefa mandeha ihany koa. Ka amin'ny fanapahana hevitra na tsiamanan-danjahividy ajuicer, ity no azo lazaina: Eny, rehefa mieritreritra momba ny akora fotsiny izy dia tsy lafo kokoaranom-boankazoao an-trano. Raha misotro toaka ianaoranom-boankazoin-droa isan-kerinandro, angamba izy iomanan-danjaizany.07/14/2015
Inona ny ranom-boankazo be vy?
Isaky ny kapoakaranom-boankazomanome 3 milligrams an'nyVY, ary kapoaka voatabia, karaoty, grapefruit, mananasy na legioma mifangaroranom-boankazomamatsy miligrama 1. Voankazo sy legiomamisyny endrika tsy zakan'nyVYantsoina hoe non-hemeVY, fa ny vitamina C, izay misy voankazo sy legioma maro, dia manampy ny vatanao handray bebe kokoa
Maninona no ratsy ho anao ny misotro ronono?
Ny sakafo fihinana ranom-boankazo dia mety hitarika tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fotoana maharitra, satria tsy misy otrikaina manan-danja maro ny jus. indrindramisotro rononony sakafo dia misy fameperana kaloria henjana, izay mazàna tsy maharitra mandritra ny fotoana maharitra ary mety hitarika metabolisma miadana kokoa.
Mandany vola ve ny fisotroana ranom-boankazo?
nymisotro ronono, ataonao mora kokoa amin'ny vatanao ny mandray ny otrikaina rehetra amin'ny voankazo sy legioma nefa tsy mila miasa mafy akory. Tsy izanysimbasimba. Na izany aza, tsy ny rehetrajuicersesory ny ranom-boankazo mitovy.16.05.2020
Inona no azoko ampiasaina hanamboarana ny ranoko?
Ity fifangaroana ity dia fenoina anana maitso maitso izay tokony hohanin'ny ankamaroan'ny olona, ​​saingy mirona hialana noho ny tsirony azony. Mba hahatonga ity fampidirana mora ity amin'ny ranom-boankazo, dia amboary tsotra fotsiny ny epinara efatra lehibe, ravina kale lehibe iray, kôkômbra lehibe iray, voasarimakirana voasarimakirana iray, paoma iray ary karaoty kely iray.
Iza no ranona legioma tsara indrindra hatao ao an-trano?
Rano legioma tsara sy mahasalama hatao ao an-trano: ranona voatabia 1: ranom-boaloboka 2: ranom-episy 3: 4 jus laisoa: 5 ranom-boasary: ​​6 ranom-boankazo 6 ranom-boankazo: ranom-boasary 8: jus-parsley: 9 jus dandelion: ranom-boankazo 10 :
Misy fomba fahandro amin'ny ranom-boankazo namboarina ve?
Raha tianao ny ranom-boankazo maitso, nefa mirongatra ny vidin'ny magazay novidinao, ho anao ity toro-lalana + torolàlana natao an-trano ity. Izahay dia efa misotro ronono efa an-taonany izao, ary tao anatin'izany no nahalavorary ity fomba fahandro ranom-boankazo mamy ity. Ny ranom-boankazo maintso azonay dia feno otrikaina mora levonina ary mety amin'ny fampiasana vokatra sisa tavela amin'ny herinandro.